एप्पलले सार्वजनिक गर्यो (Airpods), यस्ता छन् फिचर्स - Gokarna News
सोमबार, असार ०९, २०७६
काठमाडौं– अमेरिकी टेक कम्पनी एप्पलले दोस्रो जेनेरेशन एयरपोडस् (AirPods) सार्वजनिक गरहेको छ । एयरपोडस् एप्पलको वायरलेस इयरफोन हो । यस इयरफोनको नेपाली मूल्य २४ हजार पर्न जान्छ । यो पटक कम्पनीले वायरलेस चार्जिङसमेतको अप्शन दिएको छ ।
तर वायरलेस चार्जिङ अप्शनवाला इयरफोनको लागि तपाई हामीले ३१ हजार जति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस इयरफोनको विक्री वितरण अर्को साताबाट सुरु हुने बताइएको छ ।
एप्पलले २०१६ मा एयरपोडस् (AirPods) सार्वजनिक गरेको थियो । सुरुवातमा उक्त डिजाइनलाई लिएर निकै मज्जा क उडाइएको थियो । अहिले भर्खरै सार्वजनिक गरिएको एयरपोडस्मा एच वान चिप (H1) दिइएको छ । कम्पनीको दाबी अनुसार यसले ५० प्रतिशत टल्कटाइम र एप्पल डिबाइसमा डबल कनेक्टिभिटी दिनेछ । कम्पनीका अनुसार यो चिपले सुपेरियर अडियोको लागि विशेष तरिकाले डिजाइन गरिएको छ ।
इस एयरपोडस्मा हेइ सिरि (Hey Siri) वाँयस एक्टिबेशनलाई पनि सपोर्ट दिइएको छ । जहाँ तपाई हामीले एयरपोडसलाई हेइ सिरिले बोलाएर गीतलाई परिवर्तन गर्न, कल गर्न र म्याप्समा नेविगेशन गर्न सक्छौं । यो पटक भने कम्पनीले वायरलेस चार्जिङवाला एयरपोडस् पनि पेश गरेको छ ।
कम्पनीको दाबी अनुसार एक पटक चार्ज गरेपछि २४ घण्टासम्म लिस्निङ टाइम दिनेछ । यसलाई कुनैपनि क्युआई (QI) एनेबल वायरलेस चार्जरमा राखेर चार्ज गर्न सकिनेछ ।
देशैभरी सञ्चालित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द
‘टाइम्स अफ नेपाल’ एपमा अब समाचार पढ्न मात्र होइन सुन्न पनि सकिने
के तपाई यस्तो मोबाइल चलाईराख्नु भएको छ ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन
विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रमा नेपालको ऐतिहासिक सफलता, आफ्नै भू–उपग्रह आकाशमा छाडियो
प्रकृतिलाई चुनौती दिँदै नयाँ आविष्कारः रोवर्टसँग बिहे र यौनसम्पर्क !
चर्चित गीत ‘गलबन्दी’मा लफडा– ‘प्रकाश सपूतविरुद्ध शम्भु राईको उजुरी’
उर्जामन्त्री पुनले भने– “बुढीगण्डकी आयोजनालाई ‘भकुण्डो’ बनाइयो भन्नुमा सत्यता छैन”
असारे विकास अझै रोकिएनः असार लागेपछि दैनिक चार अर्ब खर्च !
प्रियंका चोपडाको स्ट्याच्यू
बौद्धनाथ क्षेत्र विकास कोषको आँखा बुद्धचित्तमा जाँदा विश्व सम्पदामा सुचिकृत स्तुपामा तनाव
नेपाली चेली प्रतिष्ठा राउत मिस इङ्ल्याण्डको फाइनलमा प्रवेश
११ वर्षीय बालकको यस्तो सुसाइड नोटः मलाई कसैले माया गरेनन् !